China QAPHELA AMANQAKU EZIYINGOZI EZINGOZI ifektri abakhiqizi | Ama-APS
I-Pcba Yeshaja Esheshayo
Ukunikezwa Kwamandla Okushayela Umshayeli
Custom PCBA futhi Custom Quick ishaja
QAPHELA AMAKHASI AMAFONI AYINGOZI
Kwenzeke kithi sonke. Usuphumile futhi uyazi ukuthi ifoni yakho iyaphela. Kuvame kakhulu lapho usohambweni. Izindawo zokulinda esikhumulweni sezindiza zivame ukuba namaqoqo omhambuma azungeze izindawo ezidayisa izimpahla nogesi.
Ngeshwa, umkhonyovu obizwa nge- “juice jacking” wenza ukushaja ifoni noma ithebhulethi yakho kube yingozi. Ijusi jacking yenzeka lapho amachweba we-USB noma izintambo zitheleleka nge-malware. Uma ufaka ikhebula noma itheku elinegciwane, abakhohlisi bakhona. Kunezinhlobo ezi-2 ezahlukene zokusongelwa. Enye ukweba idatha, futhi kuzwakala sengathi kunje. Uxhuma ethekwini noma ikhebula elonakele futhi amaphasiwedi wakho noma enye idatha ingantshontshwa. Okwesibili ukufakwa kwe-malware. Uma uxhuma ethekwini noma kukhebula, i-malware ifakwa kudivayisi yakho. Ngisho nangemva kokukhipha, i-malware izohlala kudivayisi uze uyisuse.
Kuze kube manje, ijusi jacking akubonakali kuwumkhuba osabalele. Iqembu lokugenca iWall of Sheep lifakazele ukuthi kungenzeka, ngakho-ke umphakathi kufanele uqaphele - ikakhulukazi ngoba izintambo ze-USB zibukeka zingenabungozi.
1.Take ngelakho Wall Chargers ne- car chargers with you when you’re traveling.
Ungasebenzisi izintambo ezitholakala ezindaweni zomphakathi.
3.Sebenzisa ama-Wall amashaja, hhayi iziteshi zokushaja i-USB, uma ifoni yakho iphansi.
4.Faka imali kwisipele sebhethri esiphathekayo bese uyigcina ikhokhisiwe uma kwenzeka kuphakama isimo esiphuthumayo.
5.Have i-anti-malware app efana ne-Malwarebytes kumadivayisi akho bese wenza ama-scan njalo.
Isikhathi Iposi: Dec-11-2020
Imikhiqizo Eshisayo , i- Sitemap , i- AMP Ucingo
Okufakiwe Products - Sitemap - Hambayo Site
Ukushaja Okusheshayo kwe-Pcb , plug Adatpter Pcba , USB adaptha , Hambayo Ishaja , Fast Charge Car Ishaja Nge Ikhebula , Desgined Usb Charger ,